သူငယ်ချင်းတွေဟာ ဘာလို့ ကိုယ်တို့ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းဖြစ်နေရတာလဲ? – Trend.com.mm
သူငယ်ချင်းမရှိတဲ့သူဆိုတာတော့ ရှိမယ်မထင်ပါဘူး။အနည်းဆုံး တစ်ယောက်နှစ်ယောက်ကတော့ရှိမှာပါပဲ။သူငယ်ချင်းရှိတဲ့သူဟာ ရတနာတစ်ခုပိုင်ဆိုင်ထားသလိုပဲဆိုတဲ့စကားတောင်ရှိပါတယ်။ကိုယ်တို့တွေဘာလို့သူငယ်ချင်းဆိုတာကိုလိုအပ်တာလဲ၊သူငယ်ချင်းတွေက ဘာလို့ အရေးကြီးတာလဲ?
များသောအားဖြင့် စရိုက်တူ အကျင့်တူမှ ပေါင်းလို့သင်းလို့ရတာပါ။ဒီလိုအကျင့်စရိုက်တူသူငယ်ချင်းတွေဝန်းရံနေတာဟာ ကိုယ့်ကိုယ့်ကိုယ်ပြန်မြင်နေရသလိုပါပဲ။သူတို့ကလည်း ကိုယ့်မှာဘာတွေလိုအပ်နေတယ်။ဘယ်နေရာတွေမှာကောင်းတယ်၊ဆိုးတယ်၊ကိုယ်ဘယ်နေရာတွေမှာအားသာတယ်။အားနည်းတယ်ဆိုတာကို အမှန်အတိုင်းခြွင်းချက်မရှိ ပြောကြတဲ့အတွက် သူငယ်ချင်းဆိုတာ ဘ၀အတွက်မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုပါပဲ
ကိုယ်ဒုက္ခရောက်လို့ အနားမှာဘယ်သူမှမရှိတဲ့အချိန် ကျန်နေခဲ့တဲ့သူက သင့်ရဲ့ သူငယ်ချင်းကောင်းပါပဲ။ကိုယ်အဆင်ပြေလည်းအနားမှာရှိနေပြီးကိုယ်အဆင်မပြေတဲ့အခါလည်း အနားမှာရှိနေပေးတဲ့သူငယ်ချင်းကိုပိုင်ဆိုင်ထားရတာဟာ တကယ့်ကိုအားဆေးတစ်လက်ပါပဲ။
တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ့်မိဘတွေ၊ကိုယ့်ဆွေမျိုးမောင်နှမတွေ နားလည်မပေးနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကို သူငယ်ချင်းတွေက ရင်ဘတ်ချင်းတူတဲ့အတွက်နားလည်ပေးနိုင်ပါတယ်။ကိုယ့်ထက်အသက်အရွယ်ကြီးနေတဲ့အခါ၊ငယ်နေတဲ့အခါ ကိုယ့်ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာ
သင့်ရဲ့ရွယ်တူသူငယ်ချင်းတွေကသာ သင့်ခံစားချက်ကို နားလည်ပေးနိုင်ပါလိ့မ်မယ်။
*သူငယ်ချင်းတွေက သင့်ကို ပိုပြီးပြည့်စုံစေတယ်
သူငယ်ချင်းတွေရဲ့အားပေးမှု၊နားလည်မှု၊ဖေးမပေးမှု၊အကြံဥာဏ်ကောင်းတွေပေးမှု စတာတွေဟာ သင့်ဘ၀ကို တစ်ယောက်တည်းဖြတ်သန်းရတာထက် ပိုတဲ့နွေးထွေးတဲ့ခံစားချက်ကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းရတာ ပိုပြီးအားအင်ပြည့်သလို အကောင်းဆုံးသောသူငယ်ချင်းတွေက သင့်အတွက်အောင်မြင်မှုတွေကိုပါ ပိုင်ဆိုင်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်ပါတယ်။
သူငယ်ချင်းရှိခြင်းရဲ့ကောင်းကျိုးတွေထဲက တစ်ခုကတော့ ပျော်ရွှင်ရတာပါပဲ။စိတ်ညစ်စရာတွေရှိရင်တောင် သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင် ရယ်ရမောရပါတယ်။တစ်ခုခုစိတ်ညစ်စရာရှိရင်လည်းသူငယ်ချင်းတွေက အကောင်းဆုံးနားထောင်သူတွေဖြစ်ပေးတဲ့အတွက် ဘယ်အချိန်မဆိုရင်ဖွင့်လို့ရပါတယ်။သူငယ်ချင်းဆိုတာပျော်ရွှင်မှုလို့လည်းအဓိပ္ပာယ်ရပါသေးတယ်။သင်တို့ရော သူငယ်ချင်းတွေကြောင့် ပျော်ရွှင်ရတဲ့အချန်တွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်မဟုတ်လား?
ကိုယ့်ရဲ့မိဘ၊မောင်နှမတွေဟာ မိသားစုဆိုရင် သူငယ်ချင်းတွေက ကိုယ့်ရဲ့ဒုတိယမိသားစုပါပဲ။မိဘမောင်နှမတွေပြီးရင် ဘ၀တစ်လျှောက်လုံးအတူရှိနေပေးမှာက သူငယ်ချင်းတွေပါပဲ။သူငယ်ချင်းတွေဟာ ကိုယ့်မိသားစုဝင်တွေလိုပဲ အားဖြစ်စေတယ်။ပျော်ရွှင်စေတယ်။ကူညီပေးတယ်။စောင့်ရှောက်ပေးတယ်။ဒါကြောင့် သူငယ်ချင်းတွေက ဘ၀အတွက် အရေးကြီးအစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပါတယ်။
သူငယျခငျြးမရှိတဲ့သူဆိုတာတော့ ရှိမယျမထငျပါဘူး။အနညျးဆုံး တဈယောကျနှဈယောကျကတော့ရှိမှာပါပဲ။သူငယျခငျြးရှိတဲ့သူဟာ ရတနာတဈခုပိုငျဆိုငျထားသလိုပဲဆိုတဲ့စကားတောငျရှိပါတယျ။ကိုယျတို့တှဘောလို့သူငယျခငျြးဆိုတာကိုလိုအပျတာလဲ၊သူငယျခငျြးတှကေ ဘာလို့ အရေးကွီးတာလဲ?
မြားသောအားဖွငျ့ စရိုကျတူ အကငျြ့တူမှ ပေါငျးလို့သငျးလို့ရတာပါ။ဒီလိုအကငျြ့စရိုကျတူသူငယျခငျြးတှဝေနျးရံနတောဟာ ကိုယျ့ကိုယျ့ကိုယျပွနျမွငျနရေသလိုပါပဲ။သူတို့ကလညျး ကိုယျ့မှာဘာတှလေိုအပျနတေယျ။ဘယျနရောတှမှောကောငျးတယျ၊ဆိုးတယျ၊ကိုယျဘယျနရောတှမှောအားသာတယျ။အားနညျးတယျဆိုတာကို အမှနျအတိုငျးခွှငျးခကျြမရှိ ပွောကွတဲ့အတှကျ သူငယျခငျြးဆိုတာ ဘဝအတှကျမရှိမဖွဈအစိတျအပိုငျးတဈခုပါပဲ
ကိုယျဒုက်ခရောကျလို့ အနားမှာဘယျသူမှမရှိတဲ့အခြိနျ ကနျြနခေဲ့တဲ့သူက သငျ့ရဲ့သူငယျခငျြးကောငျးပါပဲ။ကိုယျအဆငျပွလေညျးအနားမှာရှိနပွေီးကိုယျအဆငျမပွတေဲ့အခါလညျး အနားမှာရှိနပေေးတဲ့သူငယျခငျြးကိုပိုငျဆိုငျထားရတာဟာ တကယျ့ကိုအားဆေးတဈလကျပါပဲ။
တဈခါတဈလေ ကိုယျ့မိဘတှေ၊ကိုယျ့ဆှမြေိုးမောငျနှမတှေ နားလညျမပေးနိုငျတဲ့ကိစ်စမြိုးကို သူငယျခငျြးတှကေ ရငျဘတျခငျြးတူတဲ့အတှကျနားလညျပေးနိုငျပါတယျ။ကိုယျ့ထကျအသကျအရှယျကွီးနတေဲ့အခါ၊ငယျနတေဲ့အခါ ကိုယျ့ခံစားခကျြကို နားလညျပေးနိုငျဖို့ဆိုတာ မလှယျပါဘူး။ဒီအခြိနျမှာ
သငျ့ရဲ့ရှယျတူသူငယျခငျြးတှကေသာ သငျ့ခံစားခကျြကို နားလညျပေးနိုငျပါလိ့မျမယျ။
*သူငယျခငျြးတှကေ သငျ့ကို ပိုပွီးပွညျ့စုံစတေယျ
သူငယျခငျြးတှရေဲ့အားပေးမှု၊နားလညျမှု၊ဖေးမပေးမှု၊အကွံဉာဏျကောငျးတှပေေးမှု စတာတှဟော သငျ့ဘဝကို တဈယောကျတညျးဖွတျသနျးရတာထကျ ပိုတဲ့နှေးထှေးတဲ့ခံစားခကျြကို ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ဘဝကိုဖွတျသနျးရတာ ပိုပွီးအားအငျပွညျ့သလို အကောငျးဆုံးသောသူငယျခငျြးတှကေ သငျ့အတှကျအောငျမွငျမှုတှကေိုပါ ပိုငျဆိုငျရအောငျကူညီပေးနိုငျပါတယျ။
သူငယျခငျြးရှိခွငျးရဲ့ကောငျးကြိုးတှထေဲက တဈခုကတော့ ပြျောရှငျရတာပါပဲ။စိတျညဈစရာတှရှေိရငျတောငျ သူငယျခငျြးတှနေဲ့တှရေ့ငျ ရယျရမောရပါတယျ။တဈခုခုစိတျညဈစရာရှိရငျလညျးသူငယျခငျြးတှကေ အကောငျးဆုံးနားထောငျသူတှဖွေဈပေးတဲ့အတှကျ ဘယျအခြိနျမဆိုရငျဖှငျ့လို့ရပါတယျ။သူငယျခငျြးဆိုတာပြျောရှငျမှုလို့လညျးအဓိပ်ပာယျရပါသေးတယျ။သငျတို့ရော သူငယျခငျြးတှကွေောငျ့ ပြျောရှငျရတဲ့အခနျြတှပေိုငျဆိုငျခဲ့ရတယျမဟုတျလား?
ကိုယျ့ရဲ့မိဘ၊မောငျနှမတှဟော မိသားစုဆိုရငျ သူငယျခငျြးတှကေ ကိုယျ့ရဲ့ဒုတိယမိသားစုပါပဲ။မိဘမောငျနှမတှပွေီးရငျ ဘဝတဈလြှောကျလုံးအတူရှိနပေေးမှာက သူငယျခငျြးတှပေါပဲ။သူငယျခငျြးတှဟော ကိုယျ့မိသားစုဝငျတှလေိုပဲ အားဖွဈစတေယျ။ပြျောရှငျစတေယျ။ကူညီပေးတယျ။စောငျ့ရှောကျပေးတယျ။ဒါကွောငျ့ သူငယျခငျြးတှကေ ဘဝအတှကျ အရေးကွီးအစိတျအပိုငျးတှဖွေဈပါတယျ။